OROMTICHA MOOTII SIRBAA -
Alii Mahammad Muussaa
abbaa hujii boonsaa
Mee tamuma himeetin
yaabo mee tam dhiisaa?
seenaa fi faaruunsaa
Xiqqon irraa himaa
yaa dhiiroo dubbisaa.
“Namuu afaan isaan
Sa duuba ani hoo
namaa gadin jiraa?
Kiyya maal taheetin
guddisa kan jaraa
koo malee hin wallisu
Jechuun lafaa ka’e
“A.B jannee kaanaa
Jecha gaafasii san
Gaafa afaan keenyaan
dubbachuu nu dhoorkan
Garuu Alii Birraan
gaafa san onnatan
sabasaaf if kannan.
birraan nuuf ibsitee
jechuun kan moggaafte
Jara nu tuffate
Kan sodaatee tures
onnee itti goote.
“Waa malli nu dhibee
janne bitaa mirgaa
Karaa sirrii dhiifnee
maaliif deemna moggaa”
Kan gaafas nuuf dhaame
arrallee nuuf ragaa.
gaafa dhabne mirga
Yeroo Ahmad Taqii
“Yaa Hundee bareedaa
meeyra bishaan lagaa”
Sirba keessatti ibse
gochaaf roorroo alagaa
dhalachuun kee bagaa!
Kana tahuu qaba
Ali Birraa keenya
wahi nutti goomtaa!
kan itti eegalte
Namuu bakka jiruu
Iddoo jiran hundaa
Kabajaa kan keetiif
Lafarratti hin hafne
An akka kiyyatti
siitu faaruu qabaa
Maqaa keetiin boonnee
siit nuuf tahe abbaa
Gahee kan kee baatee
diina meeqaat gaabbaa
Tokko siin hin gitu
tanaaf si faarfannaa
Nuti sabni kan kee
maqaa keen dhaaddannaa
Daawwitii nuuf taatee
hedduu si jaalannaa
Waaqa siif kadhanna.
Rabbi siif kadhanna.
Dr. Ali Birraa
ilma Mahammad Muussaa
Umriin tee haa taatu
Adawwiin tee shishim
cilee bishaan buute!
Previous Nama Hedduutti Sagantaa Dargaggootii Oromoo Ganna 50essoo Alii Birraa Sirba Itti Jalqabe Ulfeessuuf Qopheessaniif MN Yaahuutti Jira
Next President Morsi overthrown in Egypt